Tuug Qoys Uu Gurigooda Xadday Warqad Raali-Gelin Ah U Dhaafay | Saxafi
Nin tuug ah oo xadday guri ku yaala Magaalada Ticis ee dalka Yemen ayaa warqad raali-gelin ah u dhaafay, qoyska lahaa hoyga uu baadhay, taas oo ku caddaynayo sababta ku kaliftay inuu guridooda u soo dhaco kadibna hantidooda dhaco, waxaanu tuugani noqday ka loogu hadal haynta badnaa shabakadaha xidhiidhka bulshada ee Internet-ka.
Sida wakaaladda wararka Turkiga ee Anatoli ku warantay, tuugan ayaa xaday guri ku yaala xaafada Zahra ee magaalada Ticis oo ku taala badhtamaha dalka Yemen, ayaa xaday dhamaan alaabtii taalay gurigaa, oo talaagado, roogag iyo maacuun kala duwani ka mid tahay.
Guriga uu tuugani xaday ayaa sida wararku sheegayaan cidlo ahaa oo qoyskii lahaa ay dagaalada uga carareen todobaad ka horna la faaruqiyay, waxaanu helay guriga oo aanay cidi joogin, oo inta uu jabsaday uu alaabtii taalay oo dhan ka gurtay.
Hasa yeeshee dhacdada layaabka noqotay ayaa ahayd warqad raali gelin ah oo uu ninkaa baadhay gurigu u dhaafay qoyska uu hoygooda xaday, waxaanu warqadan ku cadeeyay sababta ku kaliftay inuu xatooyada wayn kula kaco qoyskan.
Sida uu Tawfiiq Mushtaaq oo ka mid ah qaraabada qoyska tuugani gurigooda xaday uu wakaalada wararka Anatoli u sheegay, tuuga xaday guriga ayaa warqad uu gacantiisa ku qoray, u dhaafay qoyska, taas oo uu ku dhejiyay albaabta talaagad uu kaga tagay guriga, warqadan oo qof kasta oo guriga soo galaa si degdeg ah u arkayo, sababtoo ah? Talaada uu albaabkeeda ku dhejiyay waa shayga kaliya ee alaabtii guriga taalay ka hadhay ee tuugu ka tagay.
Warqadan ayuu ninkaa xaday gurigu u qoray qoyska, waxaanu qoraal gaaban oo uu warqada ku dhigay ku yidhi, “Walaahi idimaan xadeen ee gaajo ayaa igu kaliftay, iga raali noqda waa walaalkiin Cabdoo Axmed.” Intaasi waxay ahayd qoraalka uu tuugani u dhaafay qoyska uu gurigooda sii baadhay.
Warbaahinta dalka Yemen iyo kuwa carabta oo si wayn ugu warantay ayaa badankoodu ciwaan ugu dhigay, Tuug Edeb badan oo xaday guri ku yaala magaalada Ticis kaas oo qoyskii uu gurigooda dhacay warqad raali galin ah u dhaafay.
Previous articleLayaabka Adduunka: Sharabaado Nusqaan Ku Noqday Raysal-Wasaaraha Kanada
Next articleAs House Considers Bill Recognizing Kurdistan And Somaliland, Is This The Year Of The Self-Declared State?